Faah faahin:-Guddoomiye Gobol oo ka badbaaday weerar lagu khaarijin rabay – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Faah faahin:-Guddoomiye Gobol oo ka badbaaday weerar lagu khaarijin rabay
Wararka aan ka heleyno Gobolka Sanaag ayaa waxaa ay sheegay in xalay weerar xoogan lagu qaaday Guriga uu degan yahay Guddoomiyaha Gobolkaas oo ku yaalla Magaalada Badhan, waxaana kasoo baxaya faah faahino.
Rag hubeysan oo aan heybtooda la aqoon ayaa weerar loo adeegsaday rasaas ku qaaday Guriga uu degan yahay Guddoomiye Cali Xuseen oo loo yaqaano Soomaali, hayeeshee weerarkaas uu badbaaday.
Saraakiil ka tirsan Puntland ayaa sheegay in weerarka intii uu socday iska horimaad kooban uu dhexmaray Ciidanka Ilaalada Guddoomiyaha Gobolka iyo ragii weerarka soo qaaday oo markii dambe goobta ka baxsaday.
Dad ayaa ku warramay in mar qura aaga Guriga Guddoomiye Cali Soomaali laga maqlay rasaas badan oo ka dhaceysa, wallow daiiqado kadib istaagtay, isla markaana xaaladda ay si caadi ah kusoo laabatay.
Ciidanka amniga Puntland ee ku sugan Gobolka Sanaag ayaa weerarka kadib sameeyay howlgal xoogan oo lagu raadinayo ragii ka dambeeyay falkaas, sidoo kalena uu weli socdo howlgalka oo faah faahin laga bixin cidda lagu soo qabtay.
Duqeyn diyaaradeed oo ka dhacday K/Galbeed iyo khasaaro ka dhashay